မီတာခကွာနေလျှင် ဒါကို သတိပြုကျပါ – Sharing
Dr Mrs Mg | January 8, 2020 | ဗဟုသုတ | No Comments
မီတာခကွာနေလျှင် ဒါကို သတိပြုပါ
ကျွန်မတို့နေအိမ်ကို Nov လအတွက် မီတာစာရွက်ရောက်လာပါတယ်…Dec 20ရက်နေ့က မီတာခ​ဆောင်ဖို့အတွက် စာရွက်ကို သေချာကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးပြူးသွားတယ်ပုံမှန် ၂ေ သာင်းဝန်းကျင် ဆောင်နေကျက ဒီလ ၅သောင်းကျော်တယ်ဆိုတော့ ”ဟာ..မဟုတ်သေး ဘူး” ဘယ်နားလွဲနေလဲပေါ့…ကျမအမျိုးသားက စာရွတ်ပေါ်က သုံးစွဲယူနစ်ကို သေချာစီစစ်ကြည့်ပြီး အိမ်က မီတာဘောက်နဲ့ တိုက်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ…
မီတာကို သေချာမဖတ်ပဲ ရမ်းတုတ်ပြီး ဖြည့်လိုက်တာလား?
ဆိုတာကိုတော့ မီတာစာရေးပဲ သိလိမ့်မယ်…
Novလအတွက် မီတာစာရင်းကို dec5ရက်နေ့က လာဖတ်ထားတာပါ။ စာရွက်ထဲကအတိုင်း ဆိုရင် dec 5ရက်နေ့ထိ သုံးစွဲယူနစ်က 17453 ယူနစ်ပါ။Dec 20ရက် (သူတို့ဖတ်တဲ့ရက်ထက် ၁၅ရက်တိတိ ကျော်လွန်ပြီး)ရုံးမှာ မီတာသွားဆောင်ခါနီး ဓာတ်ပုံရိုက်ယူထားတာ 17438 ယူနစ် ပဲရှိပါတယ်။
သူတို့ဖတ်စဉ်ကရက်ထက် ၁၅ရက်ပိုသုံးထားတာတောင်မှ သူတို့ဖြည့်ထားတဲ့ ယူနစ်ကို မပြည့် မှီေ သးပါဘူးရှင်…ရုံးရောက်တော့ ကျမက ကျမတို့မသုံးခဲ့ရပဲ ဒီအမောင့်ကို မဆောင်နိုင်ပါဘူး လို့ သွားပြောခဲ့ပါတယ်…နောက်လတွေကျ လျော့ပေးပါ့မယ်… ဒီစာရင်းအတိုင်းသာ ဆောင် သွား ပါ..တဲ့လေ.
ပြောချင်တာက နောက်လတွေ လျော့ပေးတာ မလျော့ပေးတာထက် သူတို့ စည်းမျဉ်းအရ ကျမတို့တွေက သုံးစွဲတဲ့ယူနစ်အပေါ်မူတည်ပြီး ဆောင်ရတဲ့ နုံးထားက မတူပါဘူးရှင့်…
၇၅ မှ ၁၀၀ယူနစ်ကြား = ၉၀ ကျပ်
၁၀၀ မှ ၁၅၀ ယူနစ်ကြား = ၁၁၀ ကျပ်
၁၅၀ မှ ၂၀၀ယူနစ်ကြား = ၁၂၀ ကျပ်
၂၀၁ ယူနစ်အထက် = ၁၂၅ ကျပ်
ဆိုတော့ကာ ကျွန်မတို့က ကိုယ်မသုံးစွဲခဲ့တဲ့ ယူနစ်ကိုလည်း ဆောင်ပေးရဦးမယ်… သူတို့ပိုရေး ထားတဲ့ ယူနစ်အတွက် ၁၂၅ကျပ်နုံးနဲ့လည်း ဆောင်ရဦးမယ်ဆိုတော့ အများကြီးနစ်နာပါတယ်
ကျမဖက်က မကျေနပ်ကြောင်း သွားပြောတဲ့အခါ ရုံးက သူတို့ဖက်က ပြန်ပြင်ပေးလို့မရတဲ့ အ တွ က် နောက်လမှ ‘0’ယူနစ်ကနေ ပြန်တွက်ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောလာပါတယ်….အဲဒီတော့ ကျမတို့ သုံးစွဲသူပြည်သူတွေအတွက်က အမှတ်တမဲ့နဲ့ မကြည့်မိပဲ သူတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာ ဆောင်မိခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး မှားယွင်းမှုတွေ ပေါ့ပျက်နိုင်မှုတွေ ဘယ်လောက်များရှိနေမလဲ?
အများသတိပြုနိုင်ရန် ကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကို မျှဝေပေးခြင်းပါ။ အားလုံးလည်း သတိပြုနိုင်ြ ကပါစေ။ Nang Mo Nom Sheng
မီတာခကှာနလြှေငျ ဒါကို သတိပွုပါ
ကြှနျမတို့နအေိမျကို Nov လအတှကျ မီတာစာရှကျရောကျလာပါတယျ…Dec 20ရကျနကေ့ မီတာခဆောငျဖို့အတှကျ စာရှကျကို သခြောကွညျ့လိုကျတော့ မကျြလုံးပွူးသှားတယျပုံမှနျ ၂ေ သာငျးဝနျးကငျြ ဆောငျနကေကြ ဒီလ ၅သောငျးကြျောတယျဆိုတော့ ”ဟာ..မဟုတျသေး ဘူး” ဘယျနားလှဲနလေဲပေါ့…ကမြအမြိုးသားက စာရှတျပျေါက သုံးစှဲယူနဈကို သခြောစီစဈကွညျ့ပွီး အိမျက မီတာဘောကျနဲ့ တိုကျစဈကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာတော့ ထငျတဲ့အတိုငျးပါပဲ…
မီတာကို သခြောမဖတျပဲ ရမျးတုတျပွီး ဖွညျ့လိုကျတာလား?
ဆိုတာကိုတော့ မီတာစာရေးပဲ သိလိမျ့မယျ…
57″ class=”alignnone Novလအတှကျ မီတာစာရငျးကို dec5ရကျနကေ့ လာဖတျထားတာပါ။ စာရှကျထဲကအတိုငျး ဆိုရငျ dec 5ရကျနထေိ့ သုံးစှဲယူနဈက 17453 ယူနဈပါ။Dec 20ရကျ (သူတို့ဖတျတဲ့ရကျထကျ ၁၅ရကျတိတိ ကြျောလှနျပွီး)ရုံးမှာ မီတာသှားဆောငျခါနီး ဓာတျပုံရိုကျယူထားတာ 17438 ယူနဈ ပဲရှိပါတယျ။
သူတို့ဖတျစဉျကရကျထကျ ၁၅ရကျပိုသုံးထားတာတောငျမှ သူတို့ဖွညျ့ထားတဲ့ ယူနဈကို မပွညျ့ မှီေ သးပါဘူးရှငျ…ရုံးရောကျတော့ ကမြက ကမြတို့မသုံးခဲ့ရပဲ ဒီအမောငျ့ကို မဆောငျနိုငျပါဘူး လို့ သှားပွောခဲ့ပါတယျ…နောကျလတှကြေ လြော့ပေးပါ့မယျ… ဒီစာရငျးအတိုငျးသာ ဆောငျ သှား ပါ..တဲ့လေ.
ပွောခငျြတာက နောကျလတှေ လြော့ပေးတာ မလြော့ပေးတာထကျ သူတို့ စညျးမဉျြးအရ ကမြတို့တှကေ သုံးစှဲတဲ့ယူနဈအပျေါမူတညျပွီး ဆောငျရတဲ့ နုံးထားက မတူပါဘူးရှငျ့…
၇၅ မှ ၁၀၀ယူနဈကွား = ၉၀ ကပျြ
၁၀၀ မှ ၁၅၀ ယူနဈကွား = ၁၁၀ ကပျြ
၁၅၀ မှ ၂၀၀ယူနဈကွား = ၁၂၀ ကပျြ
၂၀၁ ယူနဈအထကျ = ၁၂၅ ကပျြ
ဆိုတော့ကာ ကြှနျမတို့က ကိုယျမသုံးစှဲခဲ့တဲ့ ယူနဈကိုလညျး ဆောငျပေးရဦးမယျ… သူတို့ပိုရေး ထားတဲ့ ယူနဈအတှကျ ၁၂၅ကပျြနုံးနဲ့လညျး ဆောငျရဦးမယျဆိုတော့ အမြားကွီးနဈနာပါတယျ
ကမြဖကျက မကနြေပျကွောငျး သှားပွောတဲ့အခါ ရုံးက သူတို့ဖကျက ပွနျပွငျပေးလို့မရတဲ့ အ တှ ကျ နောကျလမှ ‘0’ယူနဈကနေ ပွနျတှကျပေးပါ့မယျလို့ ပွောလာပါတယျ….အဲဒီတော့ ကမြတို့ သုံးစှဲသူပွညျသူတှအေတှကျက အမှတျတမဲ့နဲ့ မကွညျ့မိပဲ သူတို့တောငျးတဲ့အတိုငျးသာ ဆောငျမိခဲ့မယျဆိုရငျ ဒီလိုမြိုး မှားယှငျးမှုတှေ ပေါ့ပကျြနိုငျမှုတှေ ဘယျလောကျမြားရှိနမေလဲ?
အမြားသတိပွုနိုငျရနျ ကမြကွုံတှခေဲ့ရတာကို မြှဝပေေးခွငျးပါ။ အားလုံးလညျး သတိပွုနိုငျွ ကပါစေ။ Nang Mo Nom Sheng
တို့ဆေး အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်ရန် သံပုရာသီးဆောင်ထားပါ။
ယနေ့ခေတ် Online Dating မလုပ်ခင် လေ့လာထားသင့်တဲ့ အချက်များ
ဖုန်းကိုင်ခွင့်မရှိ အပြင်ထွက်ခွင့်မရှိတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အကြီးမားဆုံး သီလရှင်စာသင်တိုက်